JINGHPAW KASA: ခွေးပြေးဝက်ပြေး
၁၀ ရက်နေ့က ဇါတ်ကြမ်း
မနော်မြေ - စိန်
hi friend, if you say, we are fighting for freedom that is good but if you are tickling the enemy's heart with your word that mean you are inviting more brutal enemy over Kachin people, the Kachin are protected by the hand of God not by their hands or their ability. We have to go long journey until it meets the important goal.
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာဆရာ ရေ တောထဲမှာ ပုန်းနေရတာ ဘယ်သူတွေလဲကွ
manu mana hkrak ai Ga shagawp re.myen sa wa ni gara hku myi dinglun tim myit ndaw ai sha myuhte mung danamatu Ga shagawp law law naw ka mara rit. Good Poem.........sa long as burmese troops die in battle field I am so so................!!!!!
ကဗျာ ဆရာ နဲ့ အဖွဲ့ပေါ့။၅နှစ် သား ချီး ပန်း ပြီး စပ် နေ ကျ။အ ထင် တော့ မ သေးနဲ့ ဗျ ကြိုက် တဲ့သူ ရှိ တယ်
အမှန် တရား ကို လူတွေ မကြိုက် တတ်ပါဘူး လင်္ကာ ဖွဲ့ မြှောက်ပြော မှ အဆင်ပြေ ပါလိမ့်မယ် ကဗျာ ဆရာ ရေ ထိမှာကြောက်လို့ ခေါင်းမဖော် အောင် ဇိမ်နဲ့ ၀ပ်ပြား နေမိတယ် ဆိုတာ မျိုးပေါ့
scold youself,man!you are also anoymous.
ကာရံ နဘေ မှနားမလည်တာ
သူ့ ကိုယ်သူတော့ဟုတ်နေပြီထင်မှာပေါ့ ခစ်ခစ်
ကချင်လူမျိုးတွေက ယဉ်ကျေးမူ့ အရမ်း
လေးတန်းမျှရှိတဲ့ ကချင် ပညာရေး နဲ့ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ် မတဲ့လား
ဗမာတွေတော်တာအခုမှသိလားလဒရဲ့။kiaကငတ်သေမှာမပူရဘူးနော်။ဆက်ကြေးကောက်လို့ရတယ်လေငှဲငှဲ။ငလျင်ဆိုတာသဘာဝအန္တရာယ်ဟဲ့ငပြိန်းကောင်ရဲ့။သြော်သိပြီ။ကချင်ပြည်နယ်မှာရေကြီးတာမင်းတို့လူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကဒဏ်ခတ်တာပဲဖြစ်မယ် ငိငိငိ မင်းပြောသလိုပြောကြည့်တာ။မှန်လို့ရှိရင်မင့်တို့ငါ့အောက်ကkiaခွေးတွေငါ့ကိုပြန်ဟောင်ကြလေ။